Global Voices teny Malagasy » Okraina: Lahatsary Fohy Vokarin’ny Tanora Ho An’ny Fitovian’ny Lahy sy ny Vavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Septambra 2011 6:01 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Bohdanova Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Fampandrosoana, Sarimihetsika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Katroka 7 Miliara
Ny ankamaroan'ny vehivavy Okrainiana dia nahita fianarana ambony avokoa, nefa mandray karama latsaky ny 30 isan-jato  amin'ny an'ny lehilahy mitovy laharana aminy. Mora very asa kokoa izy ireo, na tsy ho voaray hiasa mihitsy satria mety ho bovohoka. Na dia tsy niteraka aza izy, izy ihany no mbola miadidy ny ankamaroan'ireo raharaha ao an-tokantrano , izay mibahana ny fivoarany eo amin'ny asany. 50 isan-jato ihany koa ny vintana  mety hizakàny herisetra an-tokantrano.
Raha ny lalàna ao Okraina, isan'izany ny lalàm-panorenan'ny firenena, mametraka fitoviana araka ny lalàna eo amin'ny lahy sy ny vavy (miralenta), mbola asa mafy sy sarotra ny fanentsenana ny banga eo anelanelan'ny resaka lalàna sy ny fampihàrana azy. Na izany aza, ny fomba fisaina nentim-paharazana sy ny soatoavina dia miova miandàlana, ary ireo olon-tsotra hatramin'ireo mpiaro ny zon'ny vehivavy, dia mitàna toerana lehibe ao anatin'ity dingana ity. Ny Aogositra 2010, ohatra, olona 1.000 teo ho eo no nitanjozotra  [en] tao Kiev renivohitr'i Okraina mba hanohitra ny herisetra ao an-tokantrano, ary anjatony maro ireo mpirotsaka an-tsitrapo nanatevin-daharana ny fanentanana momba ny herisetra an-tokantrano.
Ny 17 Jona hatramin'ny 10 Septambra 2011 dia vondron-tanora iray manan-talenta no nametraka  [en] ny firotsahan-dry zareo ho aminà fifaninanana iray mamokatra lahatsary fohy mikasika ny miralenta, nantsoina hoe “Ny Fanelingelenan’ ny Miralenta”. Nila namokatra lahatsary maharitra 5 minitra eo ireo mpandray anjara, amin'ireo sokajy roa ireto: “5 minitra mikasika ny fitovian'ny lahy sy ny vavy (miralenta)” na “5 minitra momba ny fisorohana ny herisetra ao an-tokantrano”. Nahazo ny tàn-tsoroka avy amin'ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana Ho amin'ny Fampandrosoana (PNUD) sy ny Solontenan'ny Fiombonambe Eraopeana ao Okraina ilay fifaninanana.
Ireto ambany ireto misy fantina avy amin'ireo lahatsary izay azon'ny olona maro takarina amin'ny tenim-pirenena maro, ary afaka mijery misimisy an'ireo lahatsary napetraka ao amin'ny pejy Youtube GenderTube  koa ianareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/26/22830/
 latsaky ny 30 isan-jato: http://en.wikipedia.org/wiki/Women
 ankamaroan'ireo raharaha ao an-tokantrano: http://www.rgd.org.ua/en/background/gender_equality/
 50 isan-jato ihany koa ny vintana: http://www.undp.org.ua/en/media/1-undp-news/1169-gene-of-equality-short-films-contest-presented-in-kyiv-ukraine